Bad-Baadada Hooyada Iyo Munaasabadii Looqabtay - Cakaara News
Bad-Baadada Hooyada Iyo Munaasabadii Looqabtay
Jigjiga(CN) Isniin 8da February 2016, Xaflad lagu maa muusayay maalinka badbaadada hooyada islamarkaana lagu abaal marinayay qaar kamid ah hooyooyinka iyo dhakhaatiirtii sida fiican ooga qayb qaadatay bad baadada hooyooyinka ayaa maanta si habsami leh uga qabsoomay hoolka shirarka ee Cuspitalka Kaaramardha.
Xalfad oo si heer sare ah loosoo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar kamid ah maareeya yaasha hospitaalada,Madaxa arimaha haweeynka Maamulka magaalada jigjiga ,dhakhaartiirta ku takhasustay xanuunada haweenka ,umulisooyinka iyo marti sharaf kale.
Hadaba xalafadan ayaa waxaa ugu horayn ka hadlay mareeyaha guud ee cusbitaalka kaarmadha mudane Wali Axmed Nuur oo sheegay in munaasabadani ay tahay markii koobaad ee laqabatay islamarkaana ujeedadeedu tahay inayna hooyo dayac ama dhiigbax u dhiman wadd mooyeen, sidookalana wuxuu u mahadceliyay dhakhaatiirta iyo umulisooyika sida naxariista leh ugu adeega hooyooyinka. Waxa kale oo uu maareeyuhu sheegay in dhiigga lagu deeqo maadaama oo uu dhiigu badbaadiyo hooyo dhiigbaxaysa.
Sidoo kale waxaa iyana ka hadashay Madaxa Arimaha Haweenka iyo Caruurta Maamulka Magaalada Jigjiga oo mahad celisay dhamaan dhakhaatiirta cusbitaalka iyo xirfadlayaashaba, iyadoo ku dhiirisay in ay dadaalkooda halkaas kasiiwadaan.
Ugu danbayna waxaa xaflada lagu abaal mariyay dhakhaatiirta takhasuska ah iyo qaar kamid ah hooyooyinkii ku umulay hospitaalka islamarkaana dareenkooda ka waramay inay aad ugu faraxsanyihiin abaalmarinta la gudoonsiiyay halkaana ay kasiiwadyaan dadaalkooda ku aadan badbaada hooyada.